၃ နှဈကွာ မကျြစိကှယျနတေဲ့ ကြောငျးသားလေးကို ၃ မိနဈမကွာပဲ ကုသပေးခဲ့တဲ့ မွစိမျးရောငျဆရာတျောကွီး – Daily Feed MM
Admin_John | August 19, 2020 | News | No Comments
၃နှဈတိတိမကျြစိကှယျနသေော ကနြျော၏သား အခု’မကျြစိ ပွနျမွငျသှားပါပွီခငျဗြာ။ကနြျောကတော့ ထောကျကွနျ့ အမှတျ၆ ခွမွေနျတပျရငျးမှ တပျကွပျကွီး ကြျောဆနျးဝငျးဖွဈပါတယျ။ကနြျော၏သား မောငျကောငျးမငျးခနျ့သညျ
ဦးဏှောကျအကွိတျတညျနေ၍ ဆေးရုံတကျဆေးဝါးကုသခံနရောမှ မကျြစိလုံးဝမမွငျရပဲကှယျသှားသညျမှာ ၃နှဈရှိသှားပါပွီ။
ဆေးရုံပွောငျးပွီး မကျြစိအထူးကုဆရာဝနျကွီးမြားဖွငျ. ကုသသျောလညျးကု၍မရပါ။သတငျးအရ’ပဲခူးတိုငျး ဖွူးမွို့နယျအမွနျလမျး၁၀၇ မိုငျ၃မှာသတငျးသုံးနသေော မွစိမျးရောငျဆရာတျောဘုရားကွီးသှားရောကျပွသကု ရာ’ယနမှေ့စကုပါသညျ။ယနပေဲ့ကနြျော၏သား မကျြစိပွနျမွငျစပွုလာပွီအဖကေိုလညျး မွငျရပါပွီအမကေိုလညျးမွငျရပါပွီ။၇တနျးကြောငျးသားဘဝက စပွီးမကျြစိကှယျတာပါမကျြစိကှယျလို့ကြောငျထုတျခဲ့ရပါတယျ.။
ဟောအခုမွစိမျးရောငျဆရာတျောဘုရားကွီး၏သမထအစှမျး ဆေးဝိဇ်ဇာတို့၏ဆေးစှမျးဖွငျ့ကုသပေးရာ ကှယျနသေောမွငျစပွုလာပါပွီ။အမကေိုလညျး အဖကေိုလညျးမွငျ လောကကွီးသုံးပါးကိုလညျးမွငျလို့ မိဘနှဈပါးမှာ ဝမျးသာလှနျးလို့မကျြရမြေားတောငျကရြပါတယျ။သားဖွဈသူကလညျး အမကေိုမွငျလို့ အမကေိုဖကျငိုသလို အမကေလညျး သားကိုဖကျငိုနသေညျမှာ ဝမျးသာဝမျးနညျးဖွဈရပါသညျ။
အလားတူ ကုလိုသောဝဒေနာရှငျမြား ယခုပေးလိုကျသောဖုနျးကို ဆကျသှယျနိငျပါသညျ။မွစိမျးရောငျဆရာတျောဘုရားကွီးအားဖူးမြှျောကွညျညိုလိုသူမြား’ကနျြးမာရေးပွသလိုသူမြား ဆကျသှယျရနျ ဖုနျး၀၉၆၇၄၀၆၉၉၇၅ ။လှမျး ကွာဖွူ၀၉၆၇၄၀၆၉၉၇၅ ကနြျောမောငျကောငျးမငျးခနျ့ပါ အားလုံးင်ျဂလာပါ။
၃နှစ်တိတိမျက်စိကွယ်နေသော ကျနော်၏သား အခု’မျက်စိ ပြန်မြင်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ကျနော်ကတော့ ထောက်ကြန့် အမှတ်၆ ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ တပ်ကြပ်ကြီး ကျော်ဆန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်၏သား မောင်ကောင်းမင်းခန့်သည်
ဦးဏှောက်အကြိတ်တည်နေ၍ ဆေးရုံတက်ဆေးဝါးကုသခံနေရာမှ မျက်စိလုံးဝမမြင်ရပဲကွယ်သွားသည်မှာ ၃နှစ်ရှိသွားပါပြီ။
ဆေးရုံပြောင်းပြီး မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများဖြင်. ကုသသော်လည်းကု၍မရပါ။သတင်းအရ’ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ်အမြန်လမ်း၁၀၇ မိုင်၃မှာသတင်းသုံးနေသော မြစိမ်းရောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားရောက်ပြသကု ရာ’ယနေ့မှစကုပါသည်။ယနေ့ပဲကျနော်၏သား မျက်စိပြန်မြင်စပြုလာပြီအဖေကိုလည်း မြင်ရပါပြီအမေကိုလည်းမြင်ရပါပြီ။၇တန်းကျောင်းသားဘဝက စပြီးမျက်စိကွယ်တာပါမျက်စိကွယ်လို့ကျောင်ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်.။
ဟောအခုမြစိမ်းရောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သမထအစွမ်း ဆေးဝိဇ္ဇာတို့၏ဆေးစွမ်းဖြင့်ကုသပေးရာ ကွယ်နေသောမြင်စပြုလာပါပြီ။အမေကိုလည်း အဖေကိုလည်းမြင် လောကကြီးသုံးပါးကိုလည်းမြင်လို့ မိဘနှစ်ပါးမှာ ဝမ်းသာလွန်းလို့မျက်ရေများတောင်ကျရပါတယ်။သားဖြစ်သူကလည်း အမေကိုမြင်လို့ အမေကိုဖက်ငိုသလို အမေကလည်း သားကိုဖက်ငိုနေသည်မှာ ဝမ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်ရပါသည်။
အလားတူ ကုလိုသောဝေဒနာရှင်များ ယခုပေးလိုက်သောဖုန်းကို ဆက်သွယ်နိင်ပါသည်။မြစိမ်းရောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဖူးမျှော်ကြည်ညိုလိုသူများ’ကျန်းမာရေးပြသလိုသူများ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း၀၉၆၇၄၀၆၉၉၇၅ ။လွမ်း ကြာဖြူ၀၉၆၇၄၀၆၉၉၇၅ ကျနော်မောင်ကောင်းမင်းခန့်ပါ အားလုံးင်္ဂလာပါ။
အစိုးရထောကျပံ့ငှေ ရနိုငျတဲ့ လူစာရငျးမှာ ကိုယျပါမပါ ကွညျ့ပါ